Nasal hutsanana muvacheche | Bezzia
Nasal hutsanana muvacheche
Maria Jose Roldan | 05/09/2021 11:36 | Vacheche
Utsanana hwemhino muvacheche ibasa rinofanirwa kuitwa nevabereki zvine hungwaru uye zvine hungwaru. Zvakakosha kuita hutsanana uhu nguva dzose, kunyanya kana mwana achizvimbirwa. Kugona kuchenesa mhino kunogona kubatsira mwana kufema zvirinani, chimwe chinhu chakakosha kana zvasvika pakuwana yakanyanya kunaka kurara.
Munyaya inotevera tichazotaura zvishoma nezve hutsanana hwemhuno muvacheche uye nhungamiro yekutevera kuti uzviite nenzira yakanaka kwazvo.
1 Nguva yekuita utsanana pamhuno pavacheche
2 Matanho paunenge uchiita hutsanana hwemhuno mumacheche
Nguva yekuita utsanana pamhuno pavacheche
Hutsanana hwakadai hunofanirwa kuitwa nenzira yakajairika yekubvisa mamo akawanda uye nekuchenesa mhino. Muchiitiko chekuti mwana ane kutonhora, vabereki vanofanira kuita hutsanana hwakadai nokungwarira uye nekuona kuti mudiki anogona kufema pamwe nekukwanisika. Kubvisa mhezi yakawanda sezvinobvira zvakare kwakakosha kuitira kuti mudiki asatambure kubva kune zvimwe zvirwere zvakaita sesinusitis.
Kunze kwehutsanana hwemhino, vabereki vanogona kusarudza kuisa humidifier mukamuri kuchengetedza nzvimbo ine hunyoro uye kudzivirira kusangana mukati memazamu emwana. Mumwedzi yechando uye nekuda kwekudziya, nharaunda inoomesa zvakanyanya uye kuzara kunogona kuwedzera, saka kukosha kwekushandisa humidifier.
Matanho paunenge uchiita hutsanana hwemhuno mumacheche
Chinhu chekutanga vabereki chavanofanira kuita kuradzika mwana wavo pasi, pane yakapfava uye yakagadzikana. Chinhu chinotevera vabereki chavanofanira kuita kuita kuti mwana wavo ave akasununguka sezvinobvira. Kune izvi, zvakanaka kuve nerubatsiro rwemudiwa wako kana mumwe munhu.
Ipapo vanofanira kuwedzera madonhwe mashoma esaline solution mumhino mbiri. Iyo seramu inobatsira kubvisa iyo mamukisi yakaungana uye nenzira iyi kuona kuti mudiki anogona kufema zvirinani. Kunze kwesamu, vabereki vanogona zvakare kushandisa saline solution izvo zvinobatsira kunyatsochenesa mhino.
Aspirator ane mukurumbira anowanzoita gakava uye zvinokurudzirwa chete kuti zvishandise kana mucus wakanyanya kukosha. Iwe unofanirwa kuve wakangwarira paunenge uchiishandisa nekuti kana ikashandiswa nechimbichimbi, inogona kukonzera kukuvara kwezeve senge otitis. Zvisinei, nyanzvi dzinopa zano nezvekushandiswa kweserum pese pese uye pese pazvinokwanisika.
Muchidimbu, hutsanana hwemhuno hwakakosha kwazvo mukati memwedzi yekutanga yehupenyu hwemwana. Sezvatambotaura pamusoro apa, ndechimwe chinhu chinofanira kuitwa nemazvo kudzivirira kuita kuti mwana anyanye kutya. Hutsanana hunofanirwa kuitwa nemwana akanyatso zorora uye wozadza mune yakawanda kesi, yepanyama serum kana saline solution. Kuzvimbirira muvacheche kwakajairikaNekudaro kukosha kwehutsanana hwakanaka kubvisa zvakawandisa mamasi kubva mumhino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Vacheche » Nasal hutsanana muvacheche
Maitiro ekuziva kana iwe uri munhu anoda kukwana
Chicken inobvarura nepepuru tsvuku nemaamondi